नेपालमा कुन कम्पनीको इन्टरनेट सस्तो ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईतवार, फाल्गुन २, २०७७ १६:२३
क्लासिक टेकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने पूर्वकर्मचारी पक्राउ
नेपालमा कुन कम्पनीको इन्टरनेट सस्तो ?
काठमाडौं । हाल नेपालमा दर्जनौं सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १२७ वटा सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र लिएको भए पनि सञ्चालनमा भने ४० हाराहारी मात्र छन् ।
एउटै सेवाप्रदायकले विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा कुन सेवाप्रदायकको प्याकेज सस्तो भन्ने कुराले दुविधा उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै किसिमको दुविधाको अन्त्य गर्ने गरी कुन सेवाप्रदायकको सेवा सस्तो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै छौं ।
जसमा लागि हामीले कुल ८३ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका ठूला ५ कम्पनीको प्याकेजको तुलना गरेका छौं । जसमा भ्याट तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क समेत समेटिएको छ ।
समग्र प्याकेजमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सुविधा दिइरहेको छ । मासिक ८३३ रुपैयाँमा १० एमबीपीएसको एफटीटीएच इन्टरनेट कम्पनीको सबैभन्दा सस्तो प्याकेज हो ।
तपाईंले टेलिकमको एउटै एफटीटीएचमा इन्टरनेटसँगै आईपी टिभी र टेलिफोन सेवा समेत लिन सक्नुहुन्छ । कम्पनीले हरेक महिना नेवर्कभित्र कल गर्न सकिने गरी २५० मिनेट टकटाइम समेत दिँदै आएको छ ।
जसअनुसार तपाईंले मासिक ८७५ रुपैयाँमै १५ एमबीपीएस गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेटसँगै निःशुल्क टेलिफोन प्राप्त गर्न सक्नुहन्छ । यदि तपाईं साथमा आईपी टिभी समेत चाहनुहुन्छ भने कम्तिमा मासिक १२ सय रुपैयाँ तिर्न तयार हुनुपर्छ ।
कम्पनीले ग्राहकका लागि मासिक २४०० रुपैयाँसम्मका विभिन्न २९ वटा इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्याकेज प्याकेजको मूल्य रु प्रति महिना रु
१० एमबीपीएस १०००० (१२ महिना) ८३३
१० एमबीपीएस २६०० (३ महिना) ८६७
१५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन १०५०० (१२ महिना) ८७५
१० एमबीपीएस ९०० (१ महिना) ९००
१५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन २८५० (३ महिना) ९५०
१५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन १००० (१ महिना) १०००
२० एमबीपीएस १२५०० (१२ महिना) १०४२
२० एमबीपीएस ३४०० (३ महिना) ११३३
२० एमबीपीएस‍ १२०० (१ महिना) १२००
१५ एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन १५००० (१२ महिना) १२५०
२५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन १५५०० (१२ महिना) १२९२
१५ एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन ४१०० (३ महिना) १३६७
२५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन ४२०० (३ महिना) १४००
१५ एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन १४०० (१ महिना) १४००
२५ एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन १५०० (१ महिना) १५००
३० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन १८१०० (१२ महिना) १५०८
५० एमबीपीएस १९००० (१२ महिना) १५८३
४० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन १९७०० (१२ महिना) १६४२
३० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन ५००० (३ महिना) १६६७
५० एमबीपीएस ५०५० (३ महिना) १६८३
६० एमबीपीएस २०५०० (१२ महिना) १७०८
३० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन १७५० (१ महिना) १७५०
५० एमबीपीएस १८०० (१ महिना) १८००
६० एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन ५५०० (३ महिना) १८३३
६० एमबीपीएस/फ्री ल्याण्डलाइन २००० (१ महिना) २०००
४० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन ६००० (३ महिना) २०००
६० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री टेलिफोन २४५०० (१२ महिना) २०४२
४० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री ल्याण्डलाइन २०५० (१ महिना) २०५०
६० एमबीपीएस/एनटी टिभी/फ्री टेलिफोन ७२०० (३ महिना) २४००
फिक्स्ड लाइन इन्टरनेटमा देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायकको रुपमा रहेको वर्ल्डलिङ्कले हालै मात्र तहल्का नामक नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार तपाईंले मासिक ९०३ रुपैयाँमै १० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटसँगै आईपी टिभी चलाउन सक्नुहुन्छ ।
समग्रमा नेपाल टेलिकमको प्याकेजभन्दा केही महंगो भए पनि यो प्याकेज आईपी टिभी सेवा समेतका लागि भने नेपालकै सस्तो प्याकेज हो । तर यसमा तपाईंले केवल ३ वटा डिभाइसमा मात्र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ ।
कम्पनीले मासिक २४८६ रुपैयाँसम्मका विभिन्न ९ वटा प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
१० एमबीपीएस (३ डिभाइसमा मात्र)/१ नेट टिभी १०,८३४ (१२ महिना) ९०३
३० एमबीपीएस/१ नेट टिभी १६९५० (१२ महिना) १४१२
४० एमबीपीएस/२ नेट टिभी १९७७५ (१२ महिना) १६४८
३० एमबीपीएस/१ नेट टिभी ५०८५ (३ महिना) १६९५
४० एमबीपीएस/२ नेट टिभी ६१५८६ (३ महिना) २०५३
६० एमबीपीएस/३ नेट टिभी २४८६० (१२ महिना) २०७२
४० एमबीपीएस/२ नेट टिभी २०९१ (१ महिना) २०९१
६० एमबीपीएस/३ नेट टिभी ७२८८१ (३ महिना) २४३०
६० एमबीपीएस/३ नेट टिभी २४८६ (१ महिना) २४८६
देशकै तेस्रो तथा निजी क्षेत्रको दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको इन्टरनेट मूल्यका हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ । कम्पनीले मासिक १२४३ रुपैयाँमा सबैभन्दा सस्तो प्याकेज उपलब्ध गराइरहेको छ ।
जसमा तपाईंले २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा पाउन सक्नुहुन्छ । कम्पनीले मासिक २४८६ रुपैयाँसम्मका विभिन्न १८ वटा प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
२० एमबीपीएस १४९१६ (१२ महिना) १२४३
३५ एमबीपीएस १५५९४ (१२ महिना) १३००
३० एमबीपीएस/क्लियर टिभी १६३८५ (१२ महिना) १३६५
४५ एमबीपीएस १६९५० (१२ महिना) १४१३
२० एमबीपीएस ४५७७ (३ महिना) १५२६
२० एमबीपीएस १५८२ (१ महिना) १५८२
३५ एमबीपीएस ४७४६ (३ महिना) १५३८
४० एमबीपीएस/क्लियर टिभी १९२१० (१२ महिना) १६०१
३५ एमबीपीएस १६३९ (१२ महिना) १६३९
३० एमबीपीएस/क्लियर टिभी ४९७२ (३ महिना) १६५७
४५ एमबीपीएस ५०८५ (३ महिना) १६९५
४५ एमबीपीएस १७५२ (३ महिना) १७५२
३० एमबीपीएस/क्लियर टिभी १७५२ (१ महिना) १७५२
४० एमबीपीएस/क्लियर टिभी ६०४६ (३ महिना) २०१५
६० एमबीपीएस/क्लियर टिभी २४२९२ (१२ महिना) २०२४
४० एमबीपीएस/क्लियर टिभी २०९१ (१ महिना) २०९१
६० एमबीपीएस/क्लियर टिभी ७१७६ (३ महिना) २३९२
६० एमबीपीएस/क्लियर टिभी २४८६ (१ महिना) २४८६
नेपालमै पहिलो पटक एफटीटीएच प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन सुरु गरेको र सम्पूर्ण सेवा एफटीटीएचमै केन्द्रीत रहेको सेवाप्रदायक हो भायनेट । कम्पनीको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेजका लागि मासिक १३५६ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसमा तपाईंले ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटसँगै एउटा आईपी टिभी पाउन सक्नुहुन्छ । ३० एमबीपीएसको इन्टरनेटसँगै आईपी टिभी समेत उपलब्ध प्याकेजहरुमा यो नै नेपालको सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो ।
कम्पनीले मासिक २४८६ रुपैयाँसम्मका १२ वटा प्याकेजमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
३० एमबीपीएस/१ भाय टिभी १६२७२ (१२ महिना) १३५६
४० एमबीपीएस/२ भाय टिभी १८९८४ (१२ महिना) १४८२
३० एमबीपीएस/१ भाय टिभी ४९१६ (३ महिना) १५३९
४५ एमबीपीएस १७५२ (१ महिना) १७५२
३० एमबीपीएस/१ भाय टिभी १७५२ (१ महिना) १७५२
४० एमबीपीएस/२ भाय टिभी ५७६३ (३ महिना) १९२१
६० एमबीपीएस/३ भाय टिभी २३७३० (१२ महिना) १९७८
४० एमबीपीएस/२ भाय टिभी २०३४ (१ महिना) २०३४
६० एमबीपीएस/३ भाय टिभी ७२८६ (३ महिना) २४२९
६० एमबीपीएस/३ भाय टिभी २४८६ (१ महिना) २४८६
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले आफ्नो सबैभन्दा सस्तो प्याकेजको रुपमा १४१३ रुपैयाँमा ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जसमा आईपी टिभीको रुपमा क्लासिक प्रभु टिभी समेत पाउन सकिन्छ । कम्पनीले २४८६ रुपैयाँसम्मका विभिन्न १२ वटा प्याकेजमा इन्टरनेट दिइरहेको छ ।
३० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी १६९५० (१२ महिना) १४१३
३० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी ९१५३ (६ महिना) १५२६
४० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी १९७७० (१२ महिना) १६४८
३० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी ५०८५ (३ महिना) १६९५
४० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी १०१७० (६ महिना) १६९५
३० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी १७५२ (१ महिना) १७५२
४० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी ६१५६ (३ महिना) २०५२
६० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी २४८५५ (१२ महिना) २०७१
४० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी २०९१ (१ महिना) २०९१
४० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी १२८८२ (६ महिना) २१४७
६० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी ७२८९ (३ महिना) २४३०
६० एमबीपीएस/क्लासिक प्रभु टिभी २४८६ (१ महिना) २४८६
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा नागरिक एप चलाउँदा अब डेटा शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
यी इथिकल ह्रयाकर, जो बग पत्ता लगाउँदै मनग्गे पैसा कमाउँछन्
काठमाडौं । प्रविधिको युगमा जीवन धेरै सहज बनेको छ । परम्परागत शैलीमा अप्रत्याशित र अग्रगामी
विद्युतीय गाडीका लागि देशभर ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन निर्माणको सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा